ဆံပင်အလှပြုပြင်သူများအတွက်မည်သည့်စက်ကိရိယာလိုအပ်သနည်း။ ဆံပင်ညှပ်အလှူရှင်များအတွက်အလှပြင်ဆိုင် - ဂျပန်ကတ်ကြေး
အလှအပမြင့်တက်လာနေသည် ဤလုပ်ငန်းသည်သန်းနှင့်ချီသောအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများဖန်တီးပေးသည်။ လူတွေကကမ္ဘာကြီးကိုမြင်တဲ့ပုံစံကိုပြောင်းလဲနေတယ်။
ဤကြီးထွားလာသောစက်မှုလုပ်ငန်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အချိန်နှင့်ငွေများလိုအပ်သည်။ က ဆံပင်အလှပြုပြင်ရေးကုမ္ပဏီ လက်ျာကိရိယာများနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများလိုအပ်သည်။ ကြီးမားသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနှင့်ရိတ်သိမ်းခြင်းအားဖြင့်သင်သည်ဤလုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင်အမြတ်အစွန်းရရှိနိုင်ပါသည်။
စောင့်ဆိုင်းရာနေရာသည်အလှပြင်ဆိုင်၏နောက်ထပ်အရေးကြီးသောကဏ္ aspect တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများကသူတို့ ၀ န်ဆောင်မှုကိုစောင့်နေစဉ်တွင်သင့်ဖောက်သည်များအားအနားယူခွင့်ပြုသည်။ ကုလားထိုင်မပါတဲ့အလှပြင်ဆိုင်ကရွေးချယ်စရာမကောင်းဘူး။ အချိန်ကြာမြင့်စွာရပ်တည်ခြင်းကသင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများကိုတင်းမာစေနိုင်သည်။ စောင့်ဆိုင်းရာနေရာတွင်လှပသောကုလားထိုင်များ၊ မဂ္ဂဇင်းများနှင့်တေးဂီတကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်သင်၏ဖောက်သည်များအားနေရန်သွေးဆောင်လိမ့်မည်။ သူတို့သည်သင့်တွင်ပိုက်ဆံရှိလျှင်တစ်နာရီကြာသော ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်ပိုမိုပေးဆောင်ရန်ဆန္ဒရှိလိမ့်မည်။ သင်၏သက်တောင့်သက်သာရှိသောခုံတန်းလျားများတွင်သီးခြားထိုင်ခုံများထည့်ရန်စဉ်းစားနိုင်သည်။
တစ် ဦး က EC ည့်ခံစားပွဲ
des ည့်စားပွဲခုံများသည်မည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်မဆိုပထမဆုံးအဆက်အသွယ်ဖြစ်သည်။ ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းဆိုင်ရာအလှပြင်ဆိုင်တွင်ကောင်းမွန်စွာဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော reception ည့်ခံစားပွဲရှိသင့်သည်။ ကောင်းမွန်စွာဒီဇိုင်းဆွဲသည့် desk ည့်သည်သည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ကောင်းမွန်စွာဒီဇိုင်းဆွဲထားသည့် desk ည့်သည်သည်သင့်အားဖောက်သည်များပိုမိုဆွဲဆောင်ရန်ကူညီလိမ့်မည် မည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်မဆိုသက်ဆိုင်သည့်အခါအမြင်အာရုံဆွဲဆောင်မှုသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ သင့်တွင် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူပိုများရန်နေရာအလုံအလောက်ရှိသင့်သည်။ သင်လိုအပ်သောareaရိယာသည်သင်၏စီးပွားရေး၏ဒီဇိုင်းနှင့်ဘတ်ဂျက်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။
ဆံပင်အလှပြင်ဆိုင်တွင်ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းစုတ်တံနှင့်ဖြီးကဲ့သို့ဆံပင်အလှပြုပြင်သည့်ကိရိယာများရှိသင့်သည်။ အရွယ်အစားမှန်ဖို့သေချာပါစေ။ သင်၏ဘတ်ဂျက်ပေါ် မူတည်၍ သင်၏လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသောဆံပင်ဖြီးများကိုသင်ရှာနိုင်သည်။ သငျသညျဥပမာ, ကျယ်ပြန့်သို့မဟုတ်အမြီး - အဆုံးသတ်ဘီးထဲကနေရွေးချယ်နိုင်သည်။ သင်တို့သည်လည်းစတုရန်းသို့မဟုတ်လှော်စုတ်တံထဲကနေရွေးချယ်နိုင်သည်။
မည်သည့်အလှပြင်ဆိုင်၌မဆိုဆံပင်ကိုစိုစွတ်အောင်လုပ်ရမယ်။ ဆံပင်ရေနွေးငွေ့သည်သင်၏ဆံပင်ကိုစိုစွတ်စေသောအကောင်းဆုံးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆံပင်မီးပူစက်များနှင့်ဆံပင်ဆိုးဆေးများနှင့်ဆံပင်ဆိုးဆေးများအသုံးပြုရန်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဆံပင်မီးခိုးများ၏အရွယ်အစားနှင့်စျေးနှုန်းများများစွာရှိသည်ကိုသင်သတိပြုသင့်သည်။ သင်နှင့်သင့်ဘတ်ဂျက်အတွက်မှန်ကန်သောကုန်ပစ္စည်းကိုရွေးချယ်သင့်သည်။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးများသည်သင်၏ဆံပင်ကိုနည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်ပုံဖော်နိုင်သည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးများကိုအရွယ်အစားအမျိုးမျိုး ၄.၅ လက်မမှ ၈ လက်မအထိရရှိနိုင်သည်။ သူတို့သည်သင်၏ဖြတ်စွမ်းစွမ်းရည်ကိုတိုးတက်စေနိုင်သည်။ တိုတောင်းသောကတ်ကြေးများသည် ပို၍ တိကျကြောင်းသင်သတိပြုသင့်သည်။ သင်ပိုမိုကျွမ်းကျင်ပြီးနက်ရှိုင်းသောပေါင်းစပ်မှုလိုအပ်ပါကပိုမိုရှည်လျားပြီးပိုကြီးသောကတ်ကြေးများကို ၀ ယ်ပါ။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကတ်ကြေးမဝယ်မီသင့်သုတေသနကိုလုပ်ပါ။ သင်၌ရွေးချယ်စရာများစွာရှိရန်လုံလောက်သောသုတေသနလုပ်ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ စျေးကွက်တွင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များစွာရှိသည်။ သင်သည်မှန်ကန်သောကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှသာ ၀ ယ်ပါ။ ဖောက်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုရှာပါ။ သူတို့၏ထင်မြင်ချက်များအတွက်ကျွမ်းကျင်သူများကိုမေးပါ။ မှန်ကန်သောအရွယ်အစားကိုသေချာစွာရွေးချယ်ပါ။ သံမဏိကဲ့သို့သောကြာရှည်ခံသည့်ပစ္စည်းများနှင့်ပြုလုပ်ထားသောကတ်ကြေးများကိုသေချာဝယ်ပါ။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးများသည်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာရှည်သင့်သည်။
ခေါင်းလျှော်ရည်ဖလားကိုဆံပင်ဆေးခြင်းနှင့်ဆံပင်အေးစက်စေခြင်းအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ သင်၏ဆံပင်ကိုလျှော်ရန် (သို့) လျှော်ပေးသည့်အခါဖောက်သည်များသည်ခေါင်းလျှော်ရည်ပန်းကန်ပေါ်တွင်မိမိတို့ခေါင်းကိုထည့်သင့်သည်။
ဆံပင်ဖြောင့်သူ၊ ဆံပင်ကောက်ကောက်၊ လေမှုတ်စက်အပါအ ၀ င်ဆံပင်ပုံစံအမျိုးမျိုးရှိသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုဖောက်သည်များ၏ပုံစံလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဆံပင်အလှပြုပြင်သည့်အလှပြင်ဆိုင်၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းမှာပုံစံထိုင်ခုံများဖြစ်သည်။ သင်၏ပုံစံနှင့်ကိုက်ညီရန်အမျိုးမျိုးသောစတိုင်များနှင့်အရောင်များကိုသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
Mandat Salon ဆံပင်များ
သင်ဟာဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းတွင်မည်မျှအတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်ပါစေ၊ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကိရိယာများကိုမချန်မထားလိုပါ။ ယင်းတို့တွင်ပေါ့ပါးသောလေမှုတ်စက်များနှင့်ညှပ်တစ်စုံ၊ လှော်ဖြီး၊ ဆံပင်ညှပ်များ၊ စွယ်စုံသုံးသံ၊ ပတ်ပတ်လည်စုတ်တံများ၊ သင်တုန်းများနှင့်ဖြီးများပါဝင်သည်။ ဤဆံကေသာသည်ဖောက်သည်များ၏ဆံပင်ပုံစံကိုဆွဲခြင်း၊
သင်သည်ဤပစ္စည်းများကို ၀ ယ်ယူခြင်းမပြုမီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုအဖြစ်စဉ်းစားရန်အရေးကြီးသည်။ ၎င်းသည်သင်၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ အနိမ့်ဆုံးဝယ်ယူမှုဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များသည်အဖြေတစ်ခုရှိသည့်အခါသင်၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုကိုမပျက်စီးစေပါနှင့်။ ဒီစာရင်းထဲမှာထိပ်တန်းအရည်အသွေးဆံပင်အလှပြုပြင်ရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုသင်လိုအပ်သောပစ္စည်းများပါဝင်သည်။
ဆံပင်အလှပြုပြင်သူများအတွက်အကြံပြုထားသည့်အရွယ်အစားသည်လိုချင်သောရလဒ်ပေါ် မူတည်၍ ၅.၅ နှင့် ၆.၅ လက်မအကြားဖြစ်သည်။ တိကျသောဖြတ်တောက်ခြင်းအတွက် ၅.၅ လက်မအရွယ်ညှပ်သည်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်။ ရှည်လျားသောညှပ်ကဲ့သို့သောပိုမိုကြီးမားသောအလုပ်များအတွက်နက်ရှိုင်းသောချည်ထားခြင်း၊ ကြီးမားသောအပိုင်းများနှင့်ချုံ့ဖြတ်တောက်ခြင်းတို့အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ရှည်လျားသောညှပ်ညှပ်ညှပ်သည်အစရှိသည့်အရာများမှကတ်ကြေးကို အသုံးပြု၍ လိုအပ်သောအချိန်ကိုလျှော့ချပြီးသင့်ဖောက်သည်၏ဆံပင်ကိုသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေရန်အကောင်းဆုံးအားသာချက်ရှိသည်။
ပေါ့ပါးသောလေမှုတ်စက်သည်ဖောက်သည်များ၏ဆံပင်ကိုစတိုင်ကျအောင်နှင့်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ သွေ့ခြောက်သောအရှိန်ကိုလျှော့ချရန်၊ ပျက်စီးမှုကိုအနည်းဆုံးဖြစ်စေရန်နှင့်ဆံပင် / သော့ခလောက်များနှင့်အအေးဓာတ်ကင်းမဲ့စေရန်နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာကိုရှာဖွေသင့်သည်။
သင်၏သံထည်များသည်အမျိုးမျိုးသောရှုထောင့်များကိုရရှိရန်အတွက်အလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်သည်။ မြည်တောင့်တင်းစေရန်စည်သည်သေးငယ်လွန်းသင့်သည်။ သင့်တွင်ပြည့်စုံသောလှိုင်းနှင့်ကွေးပမာဏကိုပေးနိုင်ရန်အရွယ်အစားအလုံအလောက်ရှိသင့်သည်။
ကွဲပြားခြားနားသောဆံပင်ကောက်ကောက်ကိုဖန်တီးရန်ကွဲပြားခြားနားသောနည်းစနစ်များသုံးပြီးဖောက်သည်၏ဆံပင်ကိုထည်ပတ်ပတ်လည်တွင်ထုပ်ပါ။ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအတွက် Marcel curling iron ကိုအထူးအကြံပြုပါသည်။ ဒါဟာထိန်းချုပ်မှုနှင့်နည်းစနစ်အမျိုးမျိုးပေးထားပါတယ်။
NEXK / NAPE & မုတ်ဆိတ်ရိတ်ခြင်း၊
ဤအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောကိရိယာသည်အဆင်သင့် ဖြစ်၍ အလျင်အမြန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောတည်ဆောက်ပုံကိုဖန်တီးနေစဉ်ဆံပင်များကိုဖယ်ရှားနိုင်သည်။ သဘာ ၀ အတိုင်းကြည့်လိုလျှင်လဲလှယ်နိုင်သောဓါးများဖြင့်အရည်အသွေးမြင့်သောသင်တုန်းသည်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သင်သည်ဤဓားအမျိုးအစားနှင့်အတူ texturizing, ဖြောင့်သင်တုန်းဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်အများကြီးပိုမိုလွယ်ကူရောနှောဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ Ergonomic လက်ချောင်းဒီဇိုင်းကသင်၏လက်ကိုသဘာဝကျ။ သက်တောင့်သက်သာရှိစေခြင်းဖြင့် strain ကိုလျှော့ချသည်။ သင်သည်သင်၏နောက်သင်တုန်းကို ၀ ယ်သောအခါဤအင်္ဂါရပ်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။
ညာဘက်ဖြီး စင်ကြယ်သောအပိုင်းများတွင်ဆံပင်ကိုညှပ်ရန်သို့မဟုတ်စတိုင်ကျရန်သုံးနိုင်သည်။ ဆံပင်ကိုခွဲထုတ်ရန် clipper over comb နှင့် scissor-over comb ဟူသောနည်းစနစ်များကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။
ရှည်လျားသောဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ပြည့်စုံသောဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်အမြီးဖြတ်ခြင်းများအတွက်သုံးနိုင်သောပေါင်းစုံဘီးများသည်အခြေခံများအားလုံးကိုဖုံးအုပ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ ပိုမိုပေါ့ပါးပြီးမှောင်မိုက်သောဆံပင်များအကြားအမြင်အာရုံကွဲပြားမှုကိုတိုးပွားစေရန်ဆင်စွယ်သို့မဟုတ်အနက်ရောင်ကိုရွေးချယ်ပါ။ Professional combo များကို graphite resins နှင့် carbon filter များဖြင့်ပြုလုပ်သင့်သည်။ ၄ င်းတို့သည်ချောချောချောမွေ့မွေ့တင်ထားသည့်အပြင်အပူချိန် ၄၅၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အထိခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
သင်၏အလှပြင်ဆိုင်တွင်အပိုင်းပိုင်းကလစ်တစ်ခုလိုအပ်သည်။ ဖောက်သည်များ၏ဆံပင်ကိုညှပ်ရန်၊ ပုံစံပြုရန်နှင့်အေးမြစေရန် sectioning clips များကိုသုံးနိုင်သည်။ သူတို့ကအမျိုးမျိုးသောအရွယ်အစားနှင့်စတိုင်များလာကြ၏။ အထူးသဖြင့်ဆံပင်ခြောက်သွေ့သူများအတွက်အများဆုံးဆုပ်ကိုင်နိုင်သည့်ကလစ်များရွေးရန်အကြံပြုသည်။ ဆံပင်ခြောက်သွေ့မှုကိုပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာဖြတ်နိုင်သည်။ အမှတ်အသားများကိုစွန့်ခွာရန်မလွယ်ကူသည့်အထူးသဖြင့်သင်ယူဆောင်လာသည့်စတိုင်လ်များကိုဖန်တီးလိုသောကလစ်များကိုရှာဖွေခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ဆံပင်ညှပ်သမားအားလုံးသည်ရေပုလင်းရှိသင့်သည်။ ရေပုလင်းသည်သင်၏လက်များနှင့်အံဝင်ဂွင်ကျဖြစ်အောင်လုပ်သင့်သည်။ အထူးသဖြင့်သင်ဆံပင်ဖြန်းခြင်းနှင့်ပြည့်နှက်နေသည့်အခါအထူးအရေးကြီးသည်။ မျက်မှောက်ခေတ်ရေပုလင်းများသည်စဉ်ဆက်မပြတ်ရေဖြန်းခြင်းနှင့်တိုးချဲ့ဖြန်းဆေးစွမ်းရည်ရှိသင့်သည်။
တစ် ဦး ကအကြီးအပတ်ပတ်လည်ဖြီးတစ် ဦး အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆံပင်ညှပ်သမား။ brush round တစ်ခုကသင့်အားအပြစ်အနာအဆာကင်းသော blowouts လုပ်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ သင်သည်သင်၏ဖြီး၏အရွယ်အစားနှင့်ပတ်သက်။ သတိထားရန်လိုအပ်သည်။ အမျိုးအစား ၃ မျိုးရှိပါတယ်။
စည်သေးသေးလေး ပုံစံ - အကယ်၍ သင့်တွင်ဆံပင်တိုနေလျှင်စည်သေးသေးလေးတစ်ခုလုံလောက်ပေလိမ့်မည်။
အလယ်အလတ်စည် ပုံစံ - ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်အလယ်အလတ်တန်းရှိသောစည်သည်အခြေခံပြည့်စုံမှုကိုဖန်တီးလိုသူများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်
ကြီးမားသောစည်အမျိုးအစား - သင်သည်ရှည်လျား။ ဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်မှန်စွာကြည့်လိုပါကစည်ကြီးသည်ရွေးချယ်စရာကောင်းသည်။
ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းသည်ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းအတွက်ကောင်းမွန်သောဆံပင်ပုံစံကိုပြုပြင်ပေးနိုင်သောအစွမ်းထက်သည့်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအရာသည်သင်၏ဆံပင်ကို ပို၍ ပြည့်စုံပြီးပိုမိုထူထပ်သောအသွင်အပြင်ကိုပေးနိုင်သည်။ တစ်ခုဝယ်ပြီးသောအခါဝက်နှင့်နိုင်လွန်စတီးရွိုက်ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုရှာပါ။ ၎င်းသည်သင့်အားအများဆုံးအသံပမာဏနှင့်တောက်ပမှုကိုပေးလိမ့်မည်။
အကယ်၍ သင်သည်ချွန်ထက်သောကတ်ကြေးများရှိပါကသင့်ဖောက်သည်များအားပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆံပင်ညှပ်ပေးနိုင်သည်။ သင်သည်သင်၏ကတ်ကြေးများကိုထက်မြက်အောင်ထိန်းသိမ်းထားသင့်သည်။ ပိုမိုထိရောက်မှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်ကြာရှည်ခံမှုတို့အတွက်သင်၏ဆံပင်အလှပြုပြင်သည့်ကတ်ကြေးများတွင်ဆီလိမ်းရန်သန့်ရှင်းသောအထည်ကိုသုံးပါ။
အကောင်းဆုံးဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးများကိုလွယ်ကူစွာရရှိနိုင်၏။ သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများကရလဒ်များကိုသဘောကျမည်။ ၎င်းသည်ထိုလှပသောအနားများကိုကြာရှည်စွာထိန်းသိမ်းထားရန်သင့်အားခွင့်ပြုသည်။
အကယ်၍ သင့်တွင်ကတ်ကြေးမှန်ရှိပါကဆံပင်ညှပ်သမားတစ်ယောက်အနေဖြင့်အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်လိမ့်မည်။ သငျသညျအလှဆုံးဆံပင်ပုံစံများနှင့်ဖြတ်တောက်မှုကိုဖန်တီးနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ဦး စွာ၊ သင်စိတ်ဝင်စားသည့်မည်သည့်စတိုင်များနှင့်နည်းစနစ်များကိုဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်သည်။
ထို့နောက်သင်ဆံပင်ညှပ်ရန်လိုအပ်သောလိုအပ်သောပုံစံနှင့်အရွယ်အစားကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ ဂျပန်ကတ်ကြေးသြစတြေးလျ ဆံပင်အလှပြုပြင်သူများအတွက်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိပြီးအရွယ်အစား ၄.၅ လက်မမှ ၇ လက်မအထိရှိသည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းဆံပင်အလှပြုပြင်သူများနှင့်ဆံပင်ညှပ်သူများသည် ၅.၅ လက်မနှင့် ၆ လက်မကတ်ကြေးများကိုမကြာခဏအသုံးပြုကြသည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၄.၅ မှ ၅.၅ လက်မကတ်ကြေးများသည်ပိုမိုတိကျပြီးဆံပင်ညှပ်ရန်အတွက်အသုံးပြုနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆံသုတ်များသည် ၆ မှ ၇ လက်မရှည်သောရှပ်ညှပ်များကို သုံး၍ အလွန်ရှုပ်ထွေးပြီးရိုးရှင်းသောအံတိုင်များအတွက်အသုံးပြုသည်။
အကောင်းဆုံးဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းဆိုင်ရာကတ်ကြေးများကို ၀ ယ်ယူသောအခါမှန်ကန်သောအရွယ်အစားကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သင်နှင့်အဆင်ပြေဆုံးအရွယ်အစားကိုရွေးချယ်သင့်သည်။
သင်၏လက်ချောင်းကိုဓားဖြင့်တိုင်းတာသင့်သည်။ ကတ်ကြေးများကိုက်ညီမှုရှိမရှိစစ်ဆေးရန်သင့်လက်ချောင်းကိုဆန့ ်၍ ဓါးသွားကိုတိုင်းပါ။ ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းနည်းစနစ်များအတွက် ၄.၅ မှ ၈ လက်မအကြားရှိကတ်ကြေးများသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ မှန်ကန်သောအရွယ်အစားသည်သင်၏လက်ကောက်ဝတ်နှင့်လက်များအပေါ်တွင်ဖိအားကိုလျှော့ချပေးလိမ့်မည်။
ယခုတွင်သင်သည်ဆံပင်ညှပ်သမားတစ် ဦး ဖြစ်နေပြီ။ ဒီဟာကသင့်အတွက်ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တာရှင်းပါတယ်။ ဂုဏ်ယူပါတယ်! ဤသည်စက်မှုလုပ်ငန်းအလွန်လေးစားခြင်းနှင့်တိုးတက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်စက်မှုလုပ်ငန်းအလွန်အမြတ်အစွန်းသည်နှင့်များစွာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများလုပ်ကြပြီ။ မှန်ကန်သောစက်ကိရိယာများနှင့်ကိရိယာများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဤဆောင်းပါးတွင်ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုစတင်ရန်သင်လိုအပ်သမျှပါရှိသည်။
ဆံပင်အလှပြုပြင်သည့်ဆိုင်ဖွင့်ရန်သင့်တွင်အစီအစဉ်ရှိပါသလား။ ၎င်းသည်သင်၏အလုပ်သစ်ကိုစတင်ရန်လိုအပ်သောကိရိယာများဖြစ်သည်။ ဆံပင်ညှပ်သမားတိုင်းရှိသင့်သည့်အရေးကြီးဆုံးကိရိယာများကိုကျွန်ုပ်တို့စာရင်းပြုစုထားသည်။ ဆံပင်ညှပ်နှင့်စုတ်တံ၊ ဖြီးနှင့်ဆံပင်ပုံစံစသည်တို့မှအရာအားလုံးကိုသင်လိုအပ်လိမ့်မည် မရှိမဖြစ်ကိရိယာများ မင်းလိုအပ်တယ်
ကတ်ကြေးနှင့်ဆံပင်ညှပ်များသည်ဆံပင်အလှကုန်သမားအားလုံးအတွက်လိုအပ်သည့်ကိရိယာများဖြစ်သည်။ ဆံပင်အလှပြုပြင်သည့်ကျောင်းတစ်ခုကိုသင်တက်ခဲ့လျှင်သင်ကိရိယာတစ်ခုစီ၏လုပ်ဆောင်မှုများနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်လိမ့်မည်။ ပါးလွှာသောကတ်ကြေးများပေါ်ရှိအနိမ့်အမြင့်များသည်အရှည်ကိုဖြတ်တောက်စရာမလိုဘဲပိုလျှံသောအထူများကိုဖယ်ရှားပေးသည်။ ပုံသဏ္rာန်သင်တုန်းဓားများသည်အလွှာများကို ဖန်တီး၍ ဆံပင်ပုံစံများကိုပုံဖော်နိုင်ပြီးဆံပင်ရိတ်ရန်ကလစ်များအသုံးပြုနိုင်သည်။
၀ န်ဆောင်မှုခံနေသူတစ် ဦး ၏ဆံပင်ကိုကတ်ကြေးနှင့်ဆံပင်ညှပ်များဖြင့်မဝတ်နိုင်ပါ။ အခြားဆံပင်ညှပ်ခြင်းနည်းစနစ်များတွင်စုတ်တံအမျိုးမျိုးသို့မဟုတ်ဖြီးအမျိုးမျိုးတို့ကိုလည်းသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ စုတ်တံအမျိုးမျိုး၏ပုံစံနှင့်အရွယ်အစားများမှာစတုရန်း၊ ပတ် ၀ န်းကျင်၊ လှော်၊ ချောချောမွေ့မွေ့စီးဆင်းခြင်း၊ ကျယ်ပြန့်သောသွားတိုက်ခြင်း၊ လှောင်ပြောင်ခြင်း၊ ဖြီးများအတွက်ရွေးချယ်စရာအမြောက်အမြားရှိသည် - အမြီးနှစ်ချောင်း၊ ကြွက်အမြီး၊ အမြီးနှင့်သွားအကျယ်။
ချောမွေ့သောသွေးရည်ကြည်များ၊ mousse၊ သင့်ရဲ့ဆံပင်ပုံစံကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည့်အတွက်ရွေးချယ်ရန်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များစွာရှိပါသည်။ သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်လိုချင်သောအရာကိုရှာဖွေရန်အမှတ်တံဆိပ်အမျိုးမျိုးကိုသင်ကြိုးစားနိုင်သည်။
၄။ သံပြား၊ ဆံပင်ကောက်ကောက်၊
ဤကိရိယာသုံးမျိုးသည်မှိုင်း။ ဆွဲဆောင်မှုမရှိသောဆံပင်ကိုလှပသောအရာအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ သံပြားသည်မည်သည့်စတိုင်လ်ကိုမဆိုလုပ်နိုင်ပြီးဆံပင်ကိုဖြောင့်ဖြောင့်စေနိုင်သည်။ သင့် client သည်ရေရှည်ဆံပင်ကောက်ကောက်များကိုလိုချင်ပါကဆံပင်ကောက်ကောက်သို့မဟုတ် Wand ကဲ့သို့သော curling tool ကိုသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
ဆံပင်ကိုစိုထိုင်းဆ၊ ဆံပင်ကောက်များ၊ မင်းခြောက်ဖို့လိုလိမ့်မယ် ဆံပင်အခြောက်ခံစက်သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပေါ့ပါး။ အစွမ်းထက်သည့်ဆံပင်အလှပြုပြင်သူများသည်သင့်ဖောက်သည်များ၏ဆံပင်ကိုခြောက်သွေ့အောင်မလုပ်နိုင်ပါ။ ၎င်းကို သုံး၍ သံမဏိပြားများမပါ ၀ င်သောထူးခြားသောစတိုင်လ်များကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
ဆံပင်ညှပ်သမားတစ် ဦး 6. ကုလားထိုင်
သင်၏ဖောက်သည်များသည်ဆံပင်ညှပ်သမားတစ်ယောက်အတွက်သက်တောင့်သက်သာရှိလိမ့်မည်။ ဆံပင်ညှပ်သမားတစ် ဦး ကုလားထိုင်၏ဒီဇိုင်း၊ အရောင်၊ ဆံပင်အလှပြုပြင်သူကုလားထိုင်၏အရေးအကြီးဆုံးအင်္ဂါရပ်မှာစတိုင်လ်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်အတက် / အညီချောမွေ့စွာရွေ့လျားနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဆံပင်အလှပြင်ဆိုင်ဘူတာများမပါဘဲသင်၏အလှပြင်ဆိုင်သည်ပြည့်စုံမှုမရှိပါ။ လှပသောဆံပင်ပုံစံများနှင့်သိုလှောင်မှုအလုံအလောက်ရှိပြီးသင်၏အလှအပပစ္စည်းများအားလုံးကိုသိုလှောင်ထားသောမှန်များကိုသင်ရှာနိုင်သည်။ သင့်တွင်ဘတ်ဂျက်အကန့်အသတ်ရှိပါကသေးငယ်သည့်စားပွဲတစ်ခု ရွေးချယ်၍ မှန်ကြီးကိုနံရံသို့ကပ်နိုင်သည်။
ဤအရာများသည်သင်၏ကိရိယာတန်ဆာပလာတွင်သင်လိုအပ်သောမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကိရိယာများသာဖြစ်သည်။ ဆံပင်ညှပ်များ၊ လက်အိတ်များ၊ ဆံပင် roller များ၊ သို့သော်ဤအချက်များသည်သင်၏ဆံပင်ပုံသဏ္lingာန်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု၌စတင်ရန်လိုအပ်သောအခြေခံလိုအပ်ချက်များဖြစ်သည်။ သင်လေ့ကျင့်ပြီးသည်နှင့်ဆံပင်ပုံသဏ္careerာန်စတင်ရန်အထောက်အကူပြုမည့်ကိရိယာများကိုစတင်ဝယ်ယူရန်အချိန်ရောက်လာပြီ။
ဒီဟာကဆံပင်အလှပြုပြင်သူတိုင်းပြန်လည်သုံးသပ်သင့်သည့်ပြည့်စုံသောစာရင်းအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ မည်သည့်စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်မဆိုကဲ့သို့ပင်လူတို့သည်ပစ္စည်းကိရိယာများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းကဲ့သို့သောအရာအားလုံးကိုအမြဲတမ်းနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိကြပါ။ ဒီဆောင်းပါးက need ည့်ခံစားပွဲမှဆံပင်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်သူများအထိဆံပင်အလှပြင်သူများအတွက်သင်လိုအပ်သည့်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ကိရိယာများကိုဖော်ပြထားသည်။
ငါရည်းစားနဲ့အတူဖုန်းပြောနေတာကမင်းတို့ရဲ့ဆံပင်ကိုပြုပြင်တာနဲ့တူတယ်ဆိုတာငါတို့ပြောနေတာ။ ဆံပင်အလှပြုပြင်သူတွေသုံးတဲ့ကိရိယာတွေ၊ မင်းတို့ဘယ်တုန်းကမှမစဉ်းစားခဲ့တဲ့သေးငယ်တဲ့အရာတွေ၊ မင်းတို့ရဲ့ကတ်ကြေးတွေအများကြီးထက်မြက်စေဖို့ပြောနေတာ။ ဆံပင်အလှပြင်သူများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကိရိယာများနှင့်ကိရိယာများ၏ဤစာရင်းကိုကျွန်ုပ်အားပြပါလိမ့်မည်။ သေချာတာပေါ့, ဆံပင်ကတ်ကြေးများကဲ့သို့သောအရာများ (နှင့်အမျိုးမျိုးသောအမျိုးအစားများ), ဒါပေမယ့်ဒါကအစပဲ။ ဆံပင်ရေနွေးငွေ့များ၊ လျှော်ဖလားများ…စာရင်းတွင်ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေသည်။